Usoro na nkọwa - trading - Libertex
Home»Usoro na nkọwa - trading
Usoro na nkọwa – trading
Ojiji Price bụ a Quote na nke Company dị njikere kụziere a Trading Operation na ụfọdụ Point nke oge.
jụọ Price bụ price na nke Client nwere ike na-eduzi a Trading Operation ịzụta Instrument, maka trading ọnụ nke ka na-eduzi Trading Operations na Agbasaruo.
ikike Onye na-a eke ma ọ bụ juridical onye eze nyere ikike jikwaa ma ọ bụ na-eduzi kpọmkwem omume.
dị ego bụ ego egosipụta na daashi Account ngalaba nke Personal Account Management Portal na ike ga-agafere si daashi Account na Trading Account wee mee dị ka iwu si guzosie ike maka Trading Nnabata.
Balance bụ a ego na ahịa Trading Account ewepu Open Positions ịkpata; Hara nhatanha nke Trading Account n'ịtụle ihe niile Emechiela Positions na Non-Trading Operations.
Base Ego bụ a ego na a Ego Mmakọ nke a na-zụta ma ọ bụ na-ere maka Quote Ego (counter Ego). Ọ bụ na numerator na a Ego Mmakọ (mbụ ego ke ụzọ).
ikele Price bụ price na nke Client nwere ike ime ka a na-ere azụmahịa (na-ere ihe Instrument), maka Trading ọnụ nke ka na-eduzi Trading Operations na Agbasaruo.
Business Day bụ a oge na-adịru site 06:00 ka 15:00 GMT ụbọchị ọ bụla, ma e wezụga ná ngwụsị izu na ememe. The ọhụrụ ọmụma banyere ngwụsị izu na ememe a na-ebipụta na Company si weebụsaịtị. Ọ nwere ike gbanwere maka 1 hour n'oge oyi na okpomọkụ oge mgbanwe.
CFD Instrument na-na-Instrument na nke Trading Operation Ẹnịm na nke dabeere ụfọdụ akpata Asset. Ihe na-ewe Asset pụrụ ịgụnye shares, onu ahia, indices, futures nakwa dị ka ihe ndị ọzọ, ihe na ọnọdụ dị ka ndepụta mma site Company. The ọmụma banyere ọnụ ọgụgụ nke CFD Instruments a na-ebipụta na Company si weebụsaịtị na ịtọ ya trading sava. Trading nkesa ozi ga-adị n'ime bụrụ na e nwere ihe ọ bụla na-emegiderịta.
Clear Balance ego - maka ndọrọ ego ego nke na ahịa na-adịghị eji na Trading ọrụ. The ego nke Clear Balance ego na gbakọọ site Company dị ka iwu si guzosie ike site na Company. The ọmụma na ego nke Clear Balance ego nwere ike kpọmkwem ke Personal Account Management Portal na ma ọ bụ trading Ọnụ.
ahịa bụ a eke ma ọ bụ juridical onye abatakwa n'ime ihe Agreement na Company na enịmde Trading Operations n'ime kpuchie nke Agreement na ya Appendices.
Ahịa Account bụ a pụrụ iche na akaụntụ na Personal Account Management Portal meghere site na Company na-edebe ndị ahịa ego ma na-eduzi Trading Operations.
mechiri emechi Position bụ n'ihi nke ogbugbu nke nke abụọ nke a Gburugburu Njem (Trading Operation nke na-emechi a ọnọdụ).
Ụlọ ọrụ Account bụ a Company ugbu akaụntụ a ego alụmdi, akaụntụ (wallet) na electronic ugwo usoro dị ka nke ọma dị ka ndị ọzọ akụkọ tinyere ndekọ nke Ịṅa Agents.
counter Ego (quote Ego) bụ a ego nke na-eji maka ịzụ ma na-ere Base Ego. Na a Ego Mmakọ Counter Ego na-anọchi anya a denominator (nke abụọ na otu na a Ego Mmakọ).
Ego Mmakọ (Forex) bụ abụọ ego (Base Ego na Counter Ego) nke na-ekere òkè a Trading Operation na ego ngwá. The ọmụma banyere ọnụ ọgụgụ nke Ego na abụọ na-anọchi anya na Company si weebụsaịtị na ịtọ ya trading sava. Trading nkesa ozi ga-adị n'ime bụrụ na e nwere ihe ọ bụla na-emegiderịta.
Dealer na-a Company ọrụ ikike ikwu Quotes, nyochaa izi ezi nke Trading Operations nke Clients, handle ọdọhọde ma kọwaa trading ọnọdụ metụtara eduzi Trading Operations na ahịa 'akaụntụ.
Equity bụ a dara nha atụmatụ nke ndị na-eri ego na Trading Account nke kasị ego nke ego na Trading Account tinyere akụkwa uru (ọnwụ).
ngafe bụ-emebi n'Onwe nke CFD Instrument, Nkwụsị ịmụrụ Trading Operations na a ugbu a na-apụtaghị ìhè Asset na-amalite a Trading Operations eduzi na-esote onye. Ngafe ụbọchị nke ọ bụla CFD Instrument na-guzosie ike site na Company unilaterally na na-kpọmkwem na Company si weebụsaịtị na ịtọ ya trading sava. Trading nkesa ozi ga-adị n'ime bụrụ na e nwere ihe ọ bụla na-emegiderịta.
Mpụga Client si Account bụ a ugbu a na akaụntụ na a ego alụmdi, akaụntụ (wallet) na electronic ugwo usoro.
Ofu Price imepụta (N'elu arịrịọ) bụ ụdị Trading Operations egbu mgbe Client na-apụ nyere na ruturu ozugbo n'ihi na-eduzi Trading Operation na mgbe ọ na-akwado ya ya na-achọ ka a Trading Operation site na ịpị na a price na Trading Ọnụ. Mgbe ịpị na price na Trading Operation a na ma enen na Company si nkesa ma ọ bụ ndị Client na-awa ka rịọ ruturu n'ihi na-eduzi Trading Operation ọzọ.
ego ndọrọ ego bụ ndọrọ ego nke ego si Client si Trading Account na ha na-ebufe ka ya ma ọ bụ ya ichekwa ego na bank nkọwa ma ọ bụ na ichekwa ego na bank nkọwa nke a ahịa Ikike Onye gosiri na ya ma ọ bụ ya na ndọrọ ego arịrịọ.
ọdịiche bụ a mgbanwe nke a price mgbe ndị na-esonụ Quote dị iche si aga otu site ọtụtụ (iri puku kwuru iri) nke Pips.
Hedging (mkpọchi) na-enwe abụọ Open Positions maka otu Instrument ebe otu ọnọdụ bụ ogologo na ndị ọzọ bụ obere.
mbụ oke (oke chọrọ) bụ nnochianya na a chọrọ na-emeghe a ọnọdụ. Oke chọrọ maka ọ bụla Instrument ga-kpọmkwem na Company si weebụsaịtị na ịtọ ya trading sava. Trading nkesa ozi ga-adị n'ime bụrụ na e nwere ihe ọ bụla na-emegiderịta.
ozugbo imepụta bụ ụdị Trading Operations egbu mgbe Client chọrọ na-eduzi a Trading Operation site na ịpị na a price na Trading Ọnụ. Ọ bụrụ na a price bụ ka n'ezie a Trading Operation na-egosi. Ọ bụrụ na a Quote na trading Ọnụ na-adịghị n'ezie ọ bụla ọzọ na-Client na-awa a ọhụrụ price maka Trading Operation egbu. Na-enye na-eduzi a Trading Operation na ọhụrụ price bụ nti n'oge a Limited oge. The Client ga-ekweta na-a kwere omume Trading Operation egbu ọ bụla Ojiji Price na Company si nkesa kwesịrị Client mgbalị kụziere a Trading Operation ugboro ugboro (dịghị ihe na-erughị 2 (abụọ) mgbalị a n'usoro) -jụrụ site Company si nkesa n'ihi mgbanwe nke Ojiji Price na ihe nkesa.
Financial ngwá bụ a Abù Instrument na (ma ọ bụ) CFD Instrument. The ọmụma banyere ọnụ ọgụgụ nke Instruments na-anọchi anya na Company si weebụsaịtị na ịtọ ya trading sava. Trading nkesa ozi ga-adị n'ime bụrụ na e nwere ihe ọ bụla na-emegiderịta.
leverage bụ ruru n'etiti olu nke a Trading Operation na ego nke Mbụ oke.
ịgba (Were Uru) na-a ụdị nke a na-kenyere ihe Order bụrụ na ihe dị otú ahụ Order ka atọrọ ka na-ere na a price (ọnụego) nke dị elu karịa na nke ugbu a ahịa ọnụego ma ọ bụ na-azụta ke price (ọnụego) nke dị ala karịa na nke ugbu a ahịa ọnụego. Isi nzube nke Ịgba iwu bụ na-ekwe nkwa a Trading Operation egbu a price na-adịghị njọ karịa onye na-kpọmkwem na Order.
Abanye File bụ akụkụ nke Trading Ọnụ na (ma ọ bụ) na Personal Account Management Portal zubere maka idozi (ndekọ) data bufee na Nnọkọ Oriri na Ọṅụṅụ ka onye ọ bụla ọzọ n'oge mmezu nke Agreement site na Trading Ọnụ na (ma ọ bụ) na Personal Account Management Portal. Ọ bụla ohere nke Agreement Party na Trading Ngwọta ma ọ bụ na Personal Account Management Portal ga-ofu na Log File na duplicated na Company si server. The kpọmkwem sava bụ isi ọmụma isi na nabatara Companies dị ka ndị na-egosi na ikpe nke na-enyocha disputable ọnọdụ ejikọrọ na mmezu nke Agreement. The ozi site na Log File nke Company si Server ga kpam kpam mkpa karịa ndị ọzọ arụmụka mgbe atụle a disputable ọnọdụ tinyere na ikwu na ozi si Log File nke Client si Trading Ọnụ na (ma ọ bụ) na Personal Account Management Portal. The ụlọ ọrụ mee ikike bụghị idozi eziokwu nke na ohere nke Agreement Party na trading Ọnụ ma ọ bụ na Personal Account Management Portal na Log File.
Long Position na-ịzụ ihe Instrument na-atụ anya na ya price (uru) ga-ebili.
Lot bụ ọkọlọtọ olu nke ihe Instrument na mmekọrita nke a Trading Operation Ẹnịm. Otu Trading Operation nwere ike mụụrụ maka ọtụtụ nza ma ọ bụ ihe omume ha. The nha nke nza maka nke ọ bụla Instrument na ụdị Trading Ọnụ ga-kpọmkwem na Company si weebụsaịtị na ịtọ ya trading sava. Trading nkesa ozi ga-adị n'ime bụrụ na e nwere ihe ọ bụla na-emegiderịta.
oke Ọkwa (Equity Ọkwa) bụ ruru n'etiti Equity na oke choro, kwuru ka a pasent.
oke Chọrọ (echekwabara ego, oke) na-a nchikota egbochi na a ahịa Trading Account ịnọgide na-enwe ya nile (ya) Open Positions. Oke chọrọ dị mkpa ka Mepee Positions bụla Instrument na-kpọmkwem na Company si weebụsaịtị na ịtọ ya trading sava. Trading nkesa ozi ga-adị n'ime bụrụ na e nwere ihe ọ bụla na-emegiderịta.
Market imepụta (Ojiji Price) bụ ụdị Trading Operations egbu mgbe Client chọrọ na-eduzi a Trading Operation ọ kwetara tupu a Trading Operation ga-egbu na a price nke bụ n'ezie na Company si server (enweghị àjà ọhụrụ Quotes).
Mid Price bụ a price n'etiti ikele na Jụọ Prices na nke a Client nwere ike na-eduzi a Trading Operation na Trading ọnụ nke ka na-eduzi Trading Operations enweghị Agbasaruo.
multiplier bụ ruru n'etiti ahia ego pasent mgbanwe Libertex ọnụ na-apụtaghị ìhè na Asset price, Base Ego price pasent mgbanwe. The ọhụrụ ọmụma banyere kacha nha nke Multipliers bụla Instrument a na-ebipụta na Company si weebụsaịtị na ịtọ ya trading sava. Trading nkesa ozi ga-adị n'ime bụrụ na e nwere ihe ọ bụla na-emegiderịta.
Non-Trading Operation bụ ịrụ ọrụ nke ego nyefe na (ma ọ bụ) ede ego anya n'ebe a ahịa Trading Account nakwa dị ka ndị ọzọ Operations abụghị kpọmkwem a Trading Operations egbu.
Open Position bụ ego nke Instrument zụrụ (ma ọ bụ na-ere), agaghị kpuchie ndị na-abụghị ire (zuo) nke otu Instrument na otu ego na (ma ọ bụ) olu; n'ihi nke ogbugbu nke akụkụ mbụ nke a njem okirikiri ahia (Trading Operations nke ọnọdụ oghere). Dị ka a N'ihi nke na-emeghe a ọnọdụ ndị Client nwere ibu na a) na-eduzi a megidere Trading Operation emechi ọnọdụ nke otu uru; b) ịnọgide na-enwe oke Ọkwa na-erughị otu guzosie ike site na Company (maka ọnụ iji nke a echiche).
Order (Pending Order, ịgba, Ọkwa) bụ a ahịa nhazi Order kụziere a Trading Operation ma ọ bụrụ na ọnọdụ, setịpụrụ Client na ahịa Trading Ọnụ na-zutere; ọ pụtara bụ na ihe dị otú ahụ Order ga-gburu na ihe unspecified oge na-eme n'ọdịnihu dị ka iwu-egbu usoro kọwara Appendices a Agreement. Dị Order ụdị adabere na Trading Ọnụ họọrọ Client.
Point (Pip) bụ otu n'ime ndị kasị nta na ịrịba Quote unit nke bụ 0,0001 ma ọ bụ 0,01 dabere na Instrument. A mgbanwe nke a Quote maka 1 (otu) unit nke keobere Atiya pụtara a mgbanwe 1 (otu) Pip.
price ndepụta na-Quotes usoro zigara trading Ọnụ gụnyere ihe nile Quotes nyere site Company na ahịa ha na arịrịọ na niile ahịa nke n'ezie ekenịmde Trading Operations.
quote Ego (counter Ego) bụ a ego na nke a price nke ihe Instrument na-denominated. Na a Ego Mmakọ Counter Ego na-anọchi anya a denominator.
quote bụ a price na nke a Trading Operation na Instrument nwere ike mụụrụ.
quote mode (egbu Type) bụ a technical usoro nke na-anata (ikwado) nke ugbu a price na-eme a ahia site Client. Dị Quote ụdịdị iche dabere na ụdị nke Trading ọnụ na Ngwá Egwú ha nkejikotara na na-kpọmkwem na kwekọrọ ekwekọ Appendices a Agreement.
ghọtara (ofu) Financial N'ihi bụ a Financial N'ihi na Gburugburu Njem. Na-adịghị mma Financial N'ihi na Gburugburu Njem bụ ahịa ọnwụ, a mma na otu onye bụ a uru.
Njem okirikiri bụ a Nchikota abụọ Kama Trading Operations na otu olu (mmalite a ọnọdụ na ya ụdi mmechi): ịzụta na ụdi n'ire ma ọ bụ na-ere na ụdi zuo banyere ọnọdụ na otu Ticket (ID).
Short Position na-ere nke Instrument-atụ anya na ya price (uru) ga-aga.
Abù Instruments na-Ego abụọ na ọla nke na-ekere òkè Trading Operations dị ka iwu si nke ntụpọ ahịa. A ndepụta Abù Instruments ji site Company na-kpọmkwem na Company si weebụsaịtị na na ya trading sava. Trading nkesa ozi ga-adị n'ime bụrụ na e nwere ihe ọ bụla na-emegiderịta.
mgbasa bụ ihe dị iche n'etiti Jụọ Price na ikele Price of ihe Instrument, kwupụtara na Pips. Gbasaa nwere ike ịdị iche iche dabere ahịa ọnọdụ.
Kwụsị Loss na-a ụdị kenyere Client si Order bụrụ na ọ bụrụ otú ahụ ihe Order ka atọrọ ka na-ere na a price (ọnụego) nke dị ala karịa na nke ugbu a ahịa ọnụego ma ọ bụ ịzụ na a price (ọnụego) nke dị elu karịa na nke ugbu a ahịa ọnụego. Isi nzube nke Kwụsị iwu bụ kụziere a Trading Operation na nke ugbu a ahịa price mgbe Order si price ruru site Instrument si price.
Kwụsị-Ọ bụ a amanyere bụ iwu nke mmechi nke Client si ọnọdụ ugbu a ahịa ahịa mgbe dị mma nke weere ruru. Iwu nke amanyere bụ iwu nke mmechi nke Client si ọnọdụ nwere ike ịdị iche dabere na-eji Trading Ọnụ na-kọwara na Appendices na Rules of Trading Operations.
Kwụsị-Ọ Ọkwa bụ ego nke ọnwụ na Open Position (Positions) nke Client kwuru ka a pasent nke bụ na ikpe nke na-eru triggers amanyere bụ iwu mmechi nke Position (Positions) site Company na Ojiji price enweghị a tupu ngosi nke Client. Kwụsị-Ọ etoju nke ọ bụla Trading Ọnụ na-kpọmkwem na Company si weebụsaịtị na setịpụrụ na Company si Server. Bụrụ na nke ọ bụla na-enweghị nkwekọ ozi kpọmkwem na Company si Server na-abịakwasị.
gbanwee bụ a rollover nke Open Position nke a Client echi. The Order na okwu nke na-gbanwee na-guzosie ike site na Company ọ bụla ụdị nke Trading Ọnụ.
akọrọ bụ a ntakiri mgbanwe nke price nke ihe Instrument. Specific ụkpụrụ nke Akọrọ niile Ngwá Egwú a na-ebipụta na Company si weebụsaịtị na ịtọ ya trading sava. Trading nkesa ozi ga-adị n'ime bụrụ na e nwere ihe ọ bụla na-emegiderịta.
tiketi (ID) bụ a pụrụ iche Identification Number na Company na-isiokwu ekenye ọ bụla meghere ọkwá ma ọ bụ Pending Order of a Client na Trading Ọnụ.
trading Account bụ a pụrụ iche ahịa Account na ndekọ idebe usoro nke Company na-eji ya maka idebe uzo nke niile Non-Trading Operations pụta, trading pụta, Open Positions, Asọ na ndị ọzọ na-eme na-arịọ nke a Client na ekekerede a Agreement na ya Appendices.
trading Day bụ a oge na-adịru site 21:00:00 ka 20:59:59 (GMT), ma e wezụga ná ngwụsị izu na ememe. The oghere na mmechi oge nke Trading Day nwere ike gbanwere maka 1 hour n'oge oyi na okpomọkụ oge mgbanwe. The ọhụrụ ọmụma banyere ngwụsị izu na ememe na-anọchi anya na Company si weebụsaịtị na ịtọ ya trading sava. Trading nkesa ozi ga-adị n'ime bụrụ na e nwere ihe ọ bụla na-emegiderịta.
trading Awa bụ a oge na-adịru mgbe Trading Operations egbu ma ọ bụ Order pụrụ isi chọta maka Instrument bụ omume. Trading nkeji oge maka onye ọ bụla Instrument na-kpọmkwem na Company si weebụsaịtị na ịtọ ya trading sava. Trading nkesa ozi ga-adị n'ime bụrụ na e nwere ihe ọ bụla na-emegiderịta. N'oge Non-Trading Awa Trading Operations egbu na Order pụrụ isi chọta (mgbanwe) agaghị ekwe omume.
trading Operation na-a akakabarede n'elu-na-na-counter ọrụ ego ngwá rụrụ n'etiti a Client na Company na-abụghị deliverable mode, i.e. ịwa negosi ịzụ ma ọ bụ na-ere ihe Instrument, ebe okwu «ịzụta» ma ọ bụ «na-ere» na-atụle technical okwu dị ka e nweghị nyefe nke nwe nke ihe Instrument. Trading Operations na-eduzi na Company ọnọdụ.
Trading Operation Volume bụ ego nke Instrument nke a na-ere ma ọ bụ zụta na nza, nkeji ịtụ nke kwekọrọ ekwekọ Instrument ma ọ bụ a ahia na ego na akwụkwọ ego nke a Balance (dabere na-eji Trading ọnụ).
trading Ọnụ bụ pụrụ iche software na ngwaike, nke na-enyere a Client na-ekweta na Company via ụwa kọmputa netwọk banyere ịrịba usoro na ọnọdụ nke Trading Operations gburu n'ime kpuchie nke a Agreement nakwa dị ka idekọ mma usoro na ọnọdụ, ịtọ ma kagbuo iwu. The Trading Ọnụ na-enye ohere na-enweta ego ozi si mba ego ahịa, zipu ntụziaka na Company na-enweta egosi na akụkọ si Company. The Trading Terminalshall enye njirimara nke Nnọkọ Oriri na Ọṅụṅụ (Nyocha nke Nnọkọ Oriri na Ọṅụṅụ) na mgbanwe ozi nakwa dị ka confidentiality na ike n'ezi ihe nke ozi na-enyemaka nke wuru-na ngwaọrụ nke ọgbàràùhie nchedo. The kpọmkwem software na ngwaike tent agụnye ozi na trading n'elu ikpo okwu Libertex nakwa dị ka ndị ọzọ na usoro akwadoro maka ojiji site Company maka nzube nke Agreement egbu.
kpatara Asset bụ ihe akpan owo bụ nke dị n'ala ala ihe Instrument na nke a na-zụta ma ọ bụ na-ere mgbe eduzi Trading Operations. Akpata Asset nwere ike na-anọchite anya ego (Base Ego), ebuka, onu ahia, indices, futures nakwa dị ka ihe ndị ọzọ, ihe na ọnọdụ dị ka ndepụta mma site Company.
akụkwa (ese n'elu mmiri, Ugbu) Financial N'ihi(Sere n'elu Uru / Loss) bụ a Financial N'ihi maka Open Positions ugbu a ahịa nke Instruments. Na-adịghị mma Financial N'ihi maka Open Positions bụ a-ese n'elu mmiri Loss, a mma na otu onye bụ a-ese n'elu mmiri Uru.
ndọrọ ego Type na-otu n'ime ụdị nke ego ndọrọ ego nyere a Client na ya ma ọ bụ ya Personal Account Management Portal.
Interview na Isi nke Product Department - LIBERTEX
Trading ikpo okwu Libertex
AlbinoMouse WordPress Okwu, © Copyright 2018 Libertex